Mọnde, Febụwarị 22, 2010 Satọde, 27 Juun 2015 Matt Chandler kwuru
Onye ọ bụla na-arụ ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ azụmahịa na-eme mkpesa ọtụtụ oge na aka nri amaghị ihe aka ekpe na-eme. N'ụwa nke taa itinye n'ịntanetị na mgbasa ozi ọdịnala, ihe ịtụnanya a gosipụtara karịa.
Ka ihe atụ: Denny's ụlọ oriri na ọụ .ụ. Nri nri nri ohuru ha ebiputara ma kesaa na njedebe nke ikpeazu bu CTA Soro mkparịta ụka ahụ na ibe Denny nke Facebook na Twitter, na weebụsaịtị ha. Otu obere nsogbu: edepụtara ID Twitter na-ezighi ezi.
Ihe omume a gosipụtara mkpa maka nkwurịta okwu n'etiti ogwe aka dijitalụ na nke ọdịnala nke ịzụ ahịa. N'eziokwu, ọtụtụ ndị na-anọdụ ala na nri abalị agaghị eche Denny na Twitter mgbe ha nọdụrụ na tebụl. Mana ụdị snafu a na ọnọdụ ọzọ nwere ike bụrụ ọdachi.